रेग्मीको शोक सभामा काग्रेसका डा. महतले भने : स्वार्थका लागि वाम एकता – Saurahaonline.com
रेग्मीको शोक सभामा काग्रेसका डा. महतले भने : स्वार्थका लागि वाम एकता
चितवन, १५ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काग्रेस खुम्चिएको भन्दै गरेको टिप्पणी प्रति नेपाली काग्रेसका सह महामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आपत्ति जनाएका छन् ।
ईतिहासको अवमुल्यन गरियो उनले भने, काँग्रेसको ईतिहास मेट्ने दिवा स्वप्न नदेख्न सुझाव छ, राजनैतिक स्वार्थका लागि बाम एकता गरेर कम्यूनिष्टको जित क्षणिक छ ।
नेपाल महिला संघ चितवनले पश्चिम चितवनको चनौलीमा आयोजना गरेको शोक सभामा बोल्दै सहमहामन्त्री डा. महतले काग्रेस कसैले सकेर नसकिने बताए । यस्तै उनले कम्यूनिष्ट सरकारको शासन शैलीले जनता हैरान भएको भन्दै काँग्रेसको विकल्प नभएको बताए ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रेग्मी परिवारको प्रसंसा गर्दै काग्रेसले त्यसको मुल्याङ्कन गरेको उनको भनाई छ । शोक सभामा जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको सहभागीता रहेको थियो ।
महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष उमा रेग्मीको बुवा खडानन्द रेग्मीको निधनको १३ औं दिनको पुण्य तिथीमा महिला संघले चितवनले शोक सभाको अयोजना गरेको हो । शुक्रवार विहान समवेदना प्रकट गर्नका लागि नेपाली काग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि रेग्मी निवास पुगेका थिए ।
शोक सभामा नेपाली काग्रेस चितवनका सभापति जीत नारायण श्रेष्ठले काग्रेसको ईतिहासले मुलुकमा राजनैतिक उपलब्धि भएको भन्दै भन्दै रेग्मी परिवारले गरेको योगदानको चर्चा गरे । नेपाल महिला संघ चितवनकी अध्यक्ष पार्वती शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष उमा रेग्मी, नेपाली काग्रेस चितवनका पूर्व सभापतिहरु श्ेषनाथ अधिकारी, पृथ्वीमान गुरुङ, तोपमानसिं गुरुङ, जिल्ला सचिव उत्तम जोशी, क्षेत्रिय सभापति लालबहादुर दवाडी, काग्रेसका महासमिति सदस्य दिनेश कोईराला, नेपाल महिला संघ चितवनकी सचिव तारा गुरुङ, स्वर्गीय रेग्मीका छोरा तिर्थ रेग्मी लगाएतले शोक मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए ।
वरिष्ठ नेता नेपाल उद्धघोष : ‘ओलीले कार्यशैली नसुधारे दुवै पदबाट हात हल्लाए हुन्छ’ २०७७, १९ मंसिर शुक्रबार